IFactory Accessories yeFowuni-i-China i-Phone Accessories Abavelisi kunye nababoneleli
Singumvelisi oqeqeshiweyo kunye nomthengisi wezixhobo zefowuni eziphathwayo e-China kwaye sizibophelele ekuboneleleni ngeenkonzo ze-OEM / ODM kubathengisi behlabathi, iibrendi, iinkampani kunye nabasasazi. Iintlobo zethu zeemveliso eziphambili zibandakanya iimeko zefowuni ezenziwe ngokwezifiso, abanini beefowuni eziphathwayo, izixhobo zefowuni eziphathwayo, iintambo zefowuni, izicoci zesikrini sefowuni yeselula, njl. Uninzi lwezixhobo zefowuni eziphathwayo ezinobumba ezikhoyo azihlawulisi mali zokubumba. Izincedisi zefowuni ezenzelwe wena ngoyilo lwakho lomntu, uphawu, ileyibhile yabucala, kunye nokupakishwa. Phonononga uluhlu lwethu lwamatyala, izibambi zokukhala, iindawo zokumisa iifowuni nokunye.
AbaPhathi beAluminiyam yeeFowuni
Ikhadi letyala leFowuni yokuma uMnini